UN: Suuq furan ayaa lagu iibiyaa hubka ciidanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea “Monitoring Group” ayaa markale sheegtay in hubka iyo rasaata ciidamada Soomaaliya lagu iibiyo suuq furan.
Warbixin ka kooban 482 bog oo ay Jimcihii heshay wakaalada wararka Reuters ayaa lagu sheegay iney soo wangaasanaaneyso xaaladaha warbixinta dowladda Soomaaliya ee keydka hubka, hase ahaatee weli ay jiraan waxyaabo aan raali laga noqon Karin.
Waxaa warbixinta soo diyaariyey 8 xubnood, kuwaasoo loo diray Somalia iyo Eritrea, waxaana warbixinta loo dugbiyey Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Kooxdaan ayaa sheegtay iney heyso cadeymo sawirro wata oo muujinaya in suuqayada Muqdisho lagu iibiyey hub cusub oo wata calaamad ganacsi oo ah 56-2 bilihii February iyo April 2014, kuwaasoo kooxdan UN ka tirsan sheegeen iney ku jireen baqaaro ku yaalla Xalane.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ganacsatada hubka ee Muqdisho u sheegeen kooxda UN-ka in wakiilada Alshabaab heleen nuuca ugu dambeeya ee hubka la siiyey ciidamada Soomaaliya.
Kooxda Monitoring Group ayaa sidoo kale sheegtay iney aragtay Vedio Alshabaab oo ay ku jiraan qoryahada wata calaamadda 56-2, kuwaasoo laga tirtiray calamadaas.
Sida kooxdani sheegtay, wareejinta hubka ayaa waxaa ku lug leh sarkaal darajo sare leh oo ka tirsan dowladda Gederaalka ah ee Soomaaliya.
Sidoo kale, ganacsatada hubka ayaa u sheegay kooxda UN in hubka ay gadaan ay bixiyeen ciidamada Soomaaliya, markii horana qaarkood laga keenay dalka Yemen.
Soomaaliya ayaa tan iyo markii laga fududeeyey cunaqabateynta hubka soo degsatay 13,000 oo hub oo kala duwan iyo 5 Milyan iyo bar rasaas ah, sida ay sheegtay kooxda UN-ka.
“Marka la eego tirade ciidamada amaanka Soomaaliya, hubkaan wuxuu ka badan yahay baahida lagula dagaalamayo Alshabaab” ayaa lagu yiri warbiuxinta Kooxda UN-ka.
Dumblamaasiga Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobaya ayaa ka jwaabin eedeymaha ay Kooxda UN Monitoring Group markale usoo jeedisay ciidamada Soomaaliya.
15-ka dale e ku jira Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobaya ayaa bishii March 2013 cunaqabateynta hubka ka fududeeyey Soomaaliya si dowladdu usoo iibsan karto hub ay kula dagaalanto Alshabaab.
Roob lagu qabowsaday oo xalay ka da’ay Muqdisho